Barak Obama Archives - नेपाल आज
Barak Obama	वर्ल्ड
ट्रम्पले लगाएको आरोप बाराक ओबामाद्वारा खण्डन
फागुन २२ । अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको आरोपको खण्डन गरेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले गतवर्ष भएको राष्ट्रपति चुनावका क्रममा ओबामा प्रशासनले ट्रम्प टावरको टेलिफोन कल ट्रयाप गरेको आरोप लगाएका थिए ।तर, पूर्वराष्ट्रपति ओबामाले त्यो आरोपमा कुनै सत्यता नभएको भन्दै खण्डन गरेका हुन् । ओबामाका प्रवक्ता केविन लुइसले ओबामा या ह्वाइट […]
ओबामाको गर्धनमा अर्बपतिको हात ! (फोटो फिचर)
Posted on: February 8, 2017Posted by: Tirtha Khanal
माघ २६ । ८ वर्षसम्म विश्वकै शक्तिशाली मुलुक अमेरिकालाई नेतृत्व गरेका बाराक ओबामाको अवकासपूर्ण जीवन सुरु भएको छ । भर्खरै उनी साताव्यापी घुमफिर सकेर वासिंटन फर्किएका छन् । ओबामाका घुमफिरका केही तस्वीर बाहिर आएका छन् । अर्बपति मित्र रिचर्ड ब्रेनसनका साथ ओबामाले भर्जिन आइल्याण्डमा केही समय बिताएका थिए । ब्रेनसन र ओबामाले ‘वाटर स्पोर्ट’को मजा […]
ह्वाइटहाउसमा ओबामाको अन्तिम पत्रकार सम्मेलन, ‘नागरिक स्वतन्त्रतामा लडिरहने प्रतिवद्धता’
माघ ६ । ह्वाइटहाउसबाट भोलिदेखि बाहिरिंदै गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले रुसमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध नहटाउन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई सल्लाह दिएका छन् । जबसम्म रुसले आफ्ना काममा सुधार गर्दैन तबसम्म उसमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन नहुने उनले प्रष्ट गरे । यूक्रेनको सम्प्रभुतामाथिको अतिक्रमण जस्ता अक्षम्य काम रुसबाट भएको ओबामाको भनाइ छ । ह्वाइटहाउसमा आठ वर्ष बिताएपछि राष्ट्रपतिका […]
बाराक ओबामाको अन्तिम भाषण, भावुक बन्दै आँशु झारे
पुस २७ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफ्नो आठ वर्षे कार्यकालको अन्तिम भाषण गरेका छन् । अब उनी सार्वजनिक रुपमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको रुपमा कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा रहने छैनन् । भाषणका क्रममा उनी निकै भावुक भएका थिए । उनले भनेका छन् मैले अमेरिकी जनतालाई जे दिनसके त्यो पर्याप्त नभएको भन्दैनिकै भावुक बनेका थिए । २० हजार […]
‘ह्वाइट हाउस’ लाई पारिवारिक व्यवसाय नठान्न ट्रम्पलाई ओबामाको चेतावनी
पुस २५ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई ‘ह्वाइट हाउस’लाई पारिवारिक व्यवसाय नठान्न सुझाव दिएका छन् । अमेरिकी टेलिभिजन च्यानल एबीसी न्यूजलाई अन्तरवार्ता दिदैं ओबामाले देशका संस्थाहरुलाई सम्मान गर्न ट्रम्पलाई सुझाव दिएका हुन् । उनले भने, ‘शपथ लिएपछि तपाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो संगठनको प्रमुख बन्नुहुन्छ ।’ चुनाव प्रचार गर्नु र सरकार चलाउनुमा […]
३५ जना रुसी कुटनीतिज्ञलाई अमेरिका छोड्न ओबामाको निर्देशन
Posted on: December 30, 2016Posted by: Tirtha Khanal
पुस १५ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ३५ जना रुसी कुटनीतिज्ञलाई अमेरिका छोड्न निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रपति ओबामाले हालै भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा साइबर हमला गरेको आरोप लगाउँदै ३५ जना रुसी कुटनीतिज्ञलाई ७२ घण्टाभित्र अमेरिका छाड्न निर्देशन दिएका हुन् । अमेरिकाले दुई वटा रुसी कार्यालय बन्द गर्नेसमेत जनाएको छ भने केही रुसीमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने […]
ह्वाटहाउस छोडेपछि यस्तो घरमा बस्दैछन् ओबामा (फोटो–फिचर)
Posted on: November 17, 2016November 18, 2016Posted by: netra
मंसिर – २ । नवनियुक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भवन ह्वाटहाउस छिर्ने पक्का भएसँगै बाराक ओबामाको लागि नयाँ घरको व्यस्था गरिएको छ । आठ बर्षसम्मको ह्वाइटहाउसको बसाइपछि ओबामा वासिङटन डिसिस्थित नयाँ घरमा सर्न लागेका हुन् । ट्रम्प ह्वाइटहाउस छिर्ने पक्का भएपछि ओबामा कस्तो घरमा बस्दै छन् भन्ने कौतुहुलता यतिबेला सबैको मनमा हुन सक्छ । ह्वाटहाउसबाट […]
अाेबामा वर्तमान राजनीतिप्रति असन्तुष्ट
Posted on: November 17, 2016Posted by: netra
मंसिर – १ । विश्वव्यापीकरणले विश्व अर्थतन्त्रमा फाइदा भएको तर वर्तमान विश्व असमानतालाई नियन्त्रण गर्नेतिर उद्दत रहेको भन्दै पछिल्ला राजनीनिक आन्दोलनलार्ई सही दिशा दिनुपर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले बताए । अमेरिकी राष्ट्रपतिका रुपमा युरोप भ्रमणमा रहनु भएका ओबामाले बुधबार ग्रीसबाट जर्मनीका लागि छुट्नुपूर्व एथेन्समा गरेकाे सम्बोधनमा विश्वव्यापीकरणको विश्व अभियानमा केही सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। हामीले […]
ट्रम्पले ओबामाको स्वास्थ्य नीतिलाई निरन्तरता दिने
Posted on: November 12, 2016Posted by: nishesh
कात्तिक २७ । अमेरिकाका नवनिर्वा्चित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बराक ओबामाको स्वास्थ्य नीतिलाई निरन्तरता दिने संकेत दिएका छन् । राष्ट्रपति निर्वा्चित भएपछि वालस्ट्रिट जर्नललाई दिएको अन्तरवार्तामा उनले यस्तो संकेत दिएका हुन् । चुनाव अभियानमा भने उनले २०१० मा ओबमाले ल्याएको स्वास्थ्य नीतिलाई पुरै खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनले यसलाई सम्पूर्ण विपत्तिको संज्ञा दिएका थिए […]
ओबामाले ट्रम्पलाई ह्वाइट हाउसमा आतिथ्य सत्कार गर्ने
Posted on: November 10, 2016Posted by: nishesh
कात्तिक २५ । अमेरिकामा नोभेम्बर ८ मा सम्पन्न भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा विजयी हुनुभएका ह्वाइट हाउसका भावी प्रमुखलाई वर्तमान राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आतिथ्य सत्कारका लागि बिहीबार आउन निमन्त्रणा गरेका छन् । राष्ट्रपतीय निर्वाचनको परिणाम घोषणाको ४८ घण्टापछि शान्त र सहज तरीकाबाट सत्ता हतान्तरण गर्ने विषयमा वार्ता पनि गर्न ओबामाले ह्वाइट हाउसको ओभल अफिसमा ट्रम्पको आतिथ्य सत्कार […]
ओबामाले भने : क्लिन्टन दृढ आत्मविश्वास भएकी सच्चा नारी हुन् ।
Posted on: November 8, 2016Posted by: Tirtha Khanal
कात्तिक २३ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले हिलारी क्लिन्टन असाधारण क्षमता भएकी महिला भएको बताएका छन् । उनले डोनाल्ड ट्रम्पको विपक्षमा भोट हाल्न हिचकिचाउनै नपर्ने बताएका छन् । मतादान केन्द्र खुल्नु आधा दिन अघि अमेरिकाको फिलाडेल्फियाको इन्डिपेडेन्स हलबाहिर आयोजना गरिएको विशाल र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति ओबामाले सो कुरा बताएका हुन् । हजारौं समर्थकहरुका माझ उनले […]
ट्रम्प विश्वका लागि खतरा : ओबामा
Posted on: November 3, 2016Posted by: Tirtha Khanal
कात्तिक १८ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्प विश्वका लागि खतरा भएको बताएका छन् । अमेरिकाको उत्तरी कैरोलाइनामा डेमोक्रेटिक पार्टीद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ट्रम्पले जिते पछिल्लो आठ वर्षमा अमेरिकाले गरेको प्रगति सबै उल्टिने खतरा रहेको बताएका छन् । उनले ट्रम्प कमाण्डर इन चीफ बन्न समेत योग्य नभएको […]
‘ओबामा तिमी नर्क जान सक्छौँ’ – फिलिपिन्सका राष्ट्रपति डुटटी
असोज १९ । फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टीले अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई तिमी नर्क जाउ भन्दै खरो जवाफ दिएका छन् । लागुऔषधविरुद्ध भएको क्रुर युद्धलाई लिएर ओबामाले फिलिपिन्सको आलोचना गरेपछि डुटर्टीले यस्तो जवाफ दिएका हुन् । डुटर्टीले भने, ‘हामीलाई सहयोग गर्नुको साटो सुरुमा आलोचना गर्नु राज्यको विभाग हो । ओबामा तिमी नर्क जान सक्छौं ।‘यस्तै, आलोचक […]
राष्ट्रपति अाेबामाकाे ‘भिटाे’ प्रस्ताव स‌ंसदद्वारा अस्वीकार
असोज – १३ । सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा भएका आतंकवादी हमलाका पीडित परिवारहरुले साउदी सरकारविरुद्ध मुद्दा चलाउन मिल्ने एउटा विधेयक अमेरिकी संसदले पारित गरेपछि राष्ट्रपति बराक ओबामाले त्यसलाई डरलाग्दो नजिर भन्दै चिन्ता जनाएका छन् । मुद्दा चलाउन नमिल्ने गरी ओबामाले, प्रस्तावित विधेयकउपर विशेषाधिकार ‘भिटो’ प्रयोग गरेका थिए, तर पछि त्यसलाई संसदले अस्वीकार गरेको […]
ईजरायलका नोवेल शान्ति पुरस्कार विजेता पूर्वराष्ट्रपति पेरेजको निधन
Posted on: September 28, 2016Posted by: nishesh
असोज १२ । नोवेल शान्ति पुरस्कार विजेता ईजरायलका पूर्वराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री शिमोन पेरेजको बुधबार निधन भएको छ । दुई साता अघिदेखि सिकिस्त विरामी भएका पेरेजको ९३ वर्षको उमेरमा स्थानीय समयअनुसार विहान ०३ बजे निधन भएको पेरेजका छोरी–ज्वाइँ रफी वालडेनले जानकारी दिए । पेरेज दुई पटक प्रधानमन्त्री र एकचोटि राष्ट्रपति बनेका थिए भने जीवनको उत्तरार्धसम्म पनि […]
ओबामाद्वारा सङ्ग्रहालयको उद्घाटन
Posted on: September 26, 2016Posted by: netra
अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले शनिबार अफ्रिकी मूलका अमेरिकीको इतिहास र संस्कृति बोकेको सङ्ग्रहालयको वासिङटनमा शनिबार उद्घाटन गरेका छन् । अमेरिकाको पहिलो अश्वेत राष्ट्रपति ओबामाले उद्घाटन गरेको सो सङ्ग्रहालयले अफ्रिकी मूलका अमेरिकीको इतिहास र संस्कृतिलाई झल्काउने बताइएको छ । उक्त सङ्ग्रहालय भवन वासिङगन नेसनल मलको परिसरमा झन्डै ३७ सय वर्गमिटर क्षेत्रफलमा बनेको छ । यद्यपी सङ्ग्रहालयको […]
सिरियाको युद्धमा घाइते ओमरोनलाई आफ्नो घर ल्याइदेउ भन्दै ६ वर्षीय बालकले लेखे ओबामालाई पत्र (भिडियोसहित)
असोज – ६ । छ वर्षीया एक अमेरिकी बालकले ओमरन डाक्निस सिरियाली शरणार्थी पाँच वर्षीय बालकलाई आफ्नो परिवारमा सामिल गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई पत्र लेखेका छन् । ओमरन डाक्निसको तस्बिर सामाजिक संजालमा देखेपछि न्युयोर्कका छ वर्षीय एलेक्सले ओबामालाई पत्र लेखेका हुन् । केही समय अगाडि सिरियामा भएको गृहयुद्धका बेला आृमरन डाकिन्स बम विस्पोटमा परेका […]
ओबामालाई भेटे महतले
असोज ६ । राष्ट्रसंघीय महासंघमा सहभागी हुन न्यूयोर्क पुगेको परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महतले अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई भेटेका छन् । सहभागी हुन पुगेका टोली, उनका जीवन साथी तथा न्यूयोर्कका स्थायी प्रतिनीधि तथा उनीहरुको सम्मान स्वरुप ओबामाले मलतलाई भेटेका हुन । भेटमा राष्ट्रपति ओबामाले नेपालको शान्ति र विकासकमा अघि बढेकाको खुसी व्यक्त गरेका थिए । महतले […]
हिलारी क्लिन्टनलाई मतदान गर्न ओबामाकाे अाग्रह
असाेज – ०२ । अमेरिकाका राष्ट्रपति बाराक ओबामाले डेमोक्र्याटिक पार्टीका तर्फका राष्ट्रपति उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनलाई मतदान गर्न अफ्रिकन मुलका अमेरिकी नागरिकलाई आह्वान गरेका छन् । उनले शनिवार आयोजित रात्रि भोजमा व्यक्तिगत आह्वान गर्दै भने, “अफ्रिकन मुलका हामी सबैले क्लिनटनलाई मतदान गर्न चुक्नु हुदैन ।” ओबामाले मतपत्रमा छापिने क्लिनटनको नाम अफ्रिकन मुलको नाम नभएपनि अफ्रिकन मुलका […]
अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाद्वारा संविधान दिवसकाे शुभकामना व्यक्त
Posted on: September 18, 2016September 18, 2016Posted by: nishesh
असोज ०२ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले नेपालको संविधान दिवस अवसरमा बधाई तथा शुभकामना प्रदान गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बधाई सन्देश पठाउँदै ओबामाले एक वर्षअघि भूकम्पमा ज्यान गुमाएका परिवारजनको दुःख अमेरिकी जनताले अझै अनुभूत गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् । ’तपाईँको देशमा विनाशकारी भूकम्प गएको एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ र त्यस विपद्मा […]
सन् २००१ मा भएकाे आतङ्ककारी आक्रमणमा मारिएका व्याक्तिकाे स्मरणसभामा राष्ट्रपति ओबामा सहभागी हुने
Posted on: September 11, 2016September 11, 2016Posted by: netra
भदाै – २६ । अमेरिकामा सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ भएको आतङ्ककारी आक्रमणमा मारिएका करिब तीन हजार व्यक्तिको स्मरणसभामा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा सहभागी हुने भएका छन् । अमेरिकाको न्यूयोर्क सहर, पेन्सिल्भानिया र पेन्टागनमा १५ वर्ष अगाडि आतङ्कवादी समूह अलकायदाले एकपछि अर्को गर्दै गरेका आक्रमणमा करिब तीन हजार अमेरिकीको निधन भएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति […]
आफूलाई गाली गरेको भन्दै फिलिपिन्सका राष्ट्रपतिलाई भेट्न मानेन ओबामाले
भदौ २१ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रोगो डुटेर्तेलाई भेट्न अस्वीकार गरेका छन् । ओबामा र डुटेर्तेबीच लाओसमा हुन लागेको आसियान शिखर सम्मेलनमा भेट्ने कार्यक्रम थियो । तर, सम्मेलनमा जानु अघि एक प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा डुटेर्तेले ओबामामाथि भद्दा गाली गरेका थिए । हृवाइट हाउसका अधिकारीहरुका अनुसार अब ओबामाले दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति पार्क ग्वेन हीसँग […]
अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामामाथि चीनमा गैर कुटनीतिक भाषा प्रयोग
Posted on: September 4, 2016Posted by: nishesh
भदाै – १९ । जी–२० को सम्मेलनमा भाग लिन आएका अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई चिनियाँ अधिकारीहरुले गैर कुटनीतिक भाषा प्रयोग गरेका छन् । राष्ट्रपतिको हैसियतबाट एसियाको अन्तिम भ्रमणमा चीन आएका उनलाई चिनियाँ अधिकारीहरुले विमानस्थलमा ‘यो हाम्रो मुलुक हो, यो हाम्रो विमानस्थल’ हो भन्दै गैर कुटनीतिक व्यवहार गरेका हुन् । चिनियाँ अधिकारीहरुले जी–२० को सम्मेलनका लागि […]
चिनियाँ राष्ट्रपति र अमेरिकी राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
Posted on: September 3, 2016Posted by: nishesh
भदाै – १८ चीनकाे पूर्वी सहर हाङ्झाओमा विश्वका राष्ट्रप्रमुख सरकार प्रमुख एवम् अन्य प्रतिनिधि आउने क्रम सुरु भएको छ । यसै अवसरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङले कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन आएका उनका अमेरिकी समकक्षी बाराक ओबामालाई शनिबार स्वागत गरे । उक्त अवसरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङले चीन अमेरिकासँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्दै सही मार्गमा […]
ओबामाले आइएसको बारेमा भनेका ७ कुरा यस्ता छन् :
Posted on: August 5, 2016Posted by: नेपाल आज सन्ध्या
साउन – २१ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले स्लामिक स्टेट आइएसलाई खतम गर्न अहिले पनि आक्रमण भैरहेको बताए । रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनमा एक सम्वाददातासँग ओबामाले आइएसलाई खतम गर्न अमेरिका लागि परेको बताएका हुन् । अमेरिकाले आइएसलाई खतम गर्न ६७ देशको साझा नेतृत्व लिएको पनि ओबामाले बताएका छन् । ओबामाले आइएसको बारेमा भनेका ७ कुरा यस्ता […]
बराक ओबामा के विशेषता थियो जसका कारण उनले यस्तो ऐतिहासिक सफलता पाए ?
Posted on: August 4, 2016Posted by: नेपाल आज प्रभात
जन्म ४ अगस्ट, १९६१ अमरीकाका ४४औं तथा वर्तमान राष्ट्रपति हुन् बाराक ओबामा । उनी अमेरिकाको प्रथम अश्वेत (अफ्रीकी अमेरिकी) राष्ट्रपति हुन। उनले २० जनवरी, २००९ का दिन राष्ट्रपति पदको शपथ ग्रहण गरेका हुन् । ओबामा इलिनोइ राज्यबाट कनिष्ठ सेनेटर तथा २००८ मा अमेरिकाका राष्टपति पदका लागि डेमोक्रयाटिक पार्टीका उम्मेद्वार थिए । ओबामाले हार्भर्ड ल स्कूलबाट […]
राष्ट्रपति ओबामा ओल्र्याण्डोमा
Posted on: June 17, 2016Posted by: नेपाल आज सन्ध्या
असार – ३ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा संयुक्त राज्य अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यको ओल्र्याण्डो सहर पुगेका छन् । उक्त सहरमा अवस्थित एक रात्रि क्लबमा गोली चलाएर एक व्यक्तिले ४९ जनाको हत्या गरेको थियो । सो स्थानमा पुगेर उनले मारिएका परिवारका आफन्तलाई भेट भटेका छन् । ह्वाइट हाउसका अनुसार राष्ट्रपति ओबामा मारिएका परिवार र घाइतेहरुलाई सान्त्वना दिन त्यहाँ […]
हिलारी किल्नटन नै अमेरिकाको लागि योग्य उम्मेद्दार भएको ओबामाको दाबी
Posted on: June 10, 2016September 22, 2016Posted by: नेपाल आज प्रभात
जेठ २८ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओमाबाले आगामी राष्ट्रपतिका लागि हिलारी क्लिन्टन सबैभन्दा योग्य उम्मेदवार भएको बताएका छन् । डेमोक्र्या्ट्रिक पार्टीका उम्मेदवारका अर्का प्रतिस्पर्धी बर्नी सैन्डर्ससँगको भेटवार्तापछि राष्ट्रपति ओबामाले हिलेरी क्लिन्टन सबैभन्दा योग्य उम्मेदवार भएको प्रक्रिया दिएका हुन् । यसअघि ओबामाले बर्नी सैन्डर्ससँग छलफल गर्दै रिपब्लिकन पार्टीका सम्भावित उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पलाई पराजित गर्दै क्लिन्टनसँगै मिलेर […]
Posted on: June 9, 2016September 22, 2016Posted by: नेपाल आज प्रभात
काठमाडौं जेठ २७ । बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असरप्रति ध्यानाकर्षण गराउन सर्वोच्च शिखर सगरमाथाबाट ल्याइएका ढुंगा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनसहित पांच शक्तिशाली देशका राष्ट्रप्रमुखलाई पठाइएको छ । पर्वतारोही फुर्वा तेन्जिङ शेर्पाले सगरमाथाबाट ल्याएका ढुंगा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, चीन र रसियाका राष्ट्रप्रमुखलाई दूतावासमार्फत पठाइन लागिएको हो । शेर्पाले मे १० मा ’हामी फेरि उठ्नेछौं’ अभियानसहित […]